トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Okanye kusetyenziswe ufakelo of pa parlour udla Xintai, okanye rhoqo itafile kusetyenziswa
Lonke kukho ezininzi elibe pa, kodwa Xintai kunye neevenkile iivenkile kunye netafile ezisetyenziswayo embindini usembindini, kukho iindidi ngeendidi nesendlu pa. Iimpawu oomatshini abatsha amaninzi, elibe pa, ibekwe kwindawo lula abathengi bahlanganisana, ukhulisa kukuba kufutshane ezikhuphisanayo evenkileni lukhulu. Xintai kukuthi, kuba ke kunokuthatha ngendleko enkulu, yaye ezifana kwiintengiso ingeniso okunzulu ukuba ngandlel 'ithile akhonkxwe, uya kuba nzima kakhulu. Ukuba ufuna ukuqalisa
Xintai kukuninzi, yi Xintai iintsuku ezininzi intshayelelo, ngakumbi ukuba ezinye imifuziselo Xintai ukho kumatshini ekuphulukenwe nalo. Eli nqanaba ke, mna Ububi Xintai kudla elibe pa. Xintai kwi pa parlour lweziko, ukuba ufuna ukudlala ngaphandle Xintai, ndicinga ukuba Kulungile ukuya ukudlala ixesha lokuba emva kweentsuku ezimbalwa ukusuka kwintshayelelo Xintai.
Lilonke, Xintai udla babalo, ivenkile for top-kuqaliswa kulo mmandla Qaphela! ?
Ngokusisiseko, ukuba ufuna phezulu ukuqaliswa Xintai kule ngingqi, ukuba singabi nako ukubetha kuphela evenkileni i Xintai, kukho iivenkile abaninzi bacinga ukuba akukho mfuneko yokuba kukhululwe imkhathaza yokudlala. Nangona kunjalo, ithuba elide imifanekiso ezithandwayo, ukuba ufuna ukukhula imodeli engundoqo-uphawu ivenkile, ungafuna ukuvula. Le ndawo, Kuxhomekeke ingcamango yolawulo.
kunye, njengoko iimpawu eqongeni esetyenziswayo amaninzi elibe pa, lingaphantsi kunokwenzeka yaye kufutshane ezikhuphisanayo lokulondoloza ivenkile ipoma, ndicinga ukuba isiseko enkulu umthengi na iziko rhoqo. Ndibeke kakhulu iqonga ezisetyenziswayo, pa nakwesiphi na isiseko umthengi ndawo maleko yobudala ise lo mkhuba eliphezulu. Yakutshanje Xintai kukuthi, uhlobo emfazweni kunye engenamnini linokuba ukwahluka, njl, kuba kukho iindlela ezintsonkothileyo baninzi, baya kuza ukuba zikholisa bengahoywanga. Ukuba
itafile esetyenzisiweyo, ezifana Xintai nayo iye yamkelwa isiseko ngumthengi bachasele kude, kukuba kusenokwenzeka ukuba avuke kwintengiso. Ukuba kuyenzeka, asinaso isizathu sokuba ukunyanzela ekuqalisweni oomatshini abatsha. Xa amadlelo, nesendlu pa, ingakumbi ngaphandle obuninzi abathengi uhuhamba, ukunyusa intengiso, nzima ngaphezu phambi evenkileni zesikhululo. Loo ngongoma, kusetyenziswa block, iindleko Xintai nabo zitshiphu kuthelekiswa, kungekhona xa ukufunyanwa kweendleko nazo lula Kwakhona nogwidi iya kuba yinto. Ekubeni
Xintai ndasibeka kakhulu, ngenxa yokuba ukumimitheka akabekwa kakhulu Toka wasebenzisa kuma, akukho yokuba cash flow akayi kuba loo ezinzima kuphela. Zonke umiselwa indawo pa evenkileni kunye nesiseko lwabathengi kunye nomgaqo-nkqubo yayo iivenkile yokuthengisa. Ngexesha, kodwa kusenokuba kukho i pa parlour lwe cash flow kakhulu, loo pa parlour, ndicinga ukuba kamsinya nje ukuzimisela kunokwenzeka xa ujonga kwi imeko imali kunye uhlengahlengiso isikhonkwane.
ngokuthi abathintela indleko yokuqala itafile esetyenziswa, ezifana ezingoovimba-nkqubo lokuncitshiswa na intlawulo ivame, imigaqo-nkqubo yolawulo kuya kuba ngcono ukuba ukucinga ukuba kukho kuphela inani Pachinkoya.
naye ingakumbi kumaXesha Aphakathi eme Xintai, nesendlu pa ukuba musa ukujikelezisa ibhola ekuqalisweni ngosuku lokuqala, ndicinga ukuba imo ekuphulukenwe nalo basenokucinga ukuba ivenkile olomeleleyo. Khangela kwi-avareji, wazisa ngosuku lokuqala ezifana Xintai kukuthi, ivenkile kakhulu retaining izikhonkwane Barker eyona incinci. ivenkile pa naluphi na uhlobo okanye into pa parlour ukuba ahambe nawe, nceda uzame ukukhangela.